Waa maxay is-diidis? Dagaallada waa inay ka joogsadaan dunida, ninku waa inuu ogaadaa xaqiiqda ah in jidhka uu jirkiisa yahay oo uu ku biirayo, waxa uu rumeysan yahay inay tahay uun ku dul-nooleyaal , u beddelashada jawi xidhan, kaas oo u oggolaanaya inuu koro, isu beddelo sidii labajibbaar kaas oo, laga bilaabo unugga, uu beddelo oo uu noqdo labawejiilenimo quruxsan, qurux badan ama fool xumo ah, taas oo ku xidhan dariiqa isbeddelka ay qaadatay
Posted By: KongoLisolowaa: July 5, 2020 00: 07 No Comments
Ilaa iyo inta ninku hore u aaminsan yahay inuu naftiisa dhammaystiray isagoo weli uun lar ah, indhihiisu ma furnaan lahayn si uu u arko wuxuu dhab ahaan yahay, m ...	Akhri wax dheeraad ah
Kumaad / maxaad ka caasineysaa? Qaab dhismeedka awoodda Ameerika? Maya, qaab dhismeedka awoodda Faransiiska? Maya, qaab dhismeedka awooda Ingiriisiga? Maya: marka waa maxay? Tani waa qaabdhismeedka caalamiga ah ee awoodaha Reer Galbeedka
Posted By: KongoLisolowaa: Agoosto 5, 2019 10: 01 No Comments
Qaab dhismeedka ka kooban labada danaha Mareykanka, Faransiiska, Ingiriiska, Biljamka iyo Yurub. Wadamadan, oo mar xukumaayay Madow / Afrikaanka, waxay dhiseen xaalad kacsan ...	Akhri wax dheeraad ah
Melanesia: xubnaha qabiilkani waxay gabi ahaanba DNA gaar u yihiin dhulka ... (VIDEO)
Posted By: KongoLisolowaa: Janaayo 10, 2017 06: 06 No Comments
Dadka Melanesian waxay ku nool yihiin gobol ku yaal woqooyiga Australia, Papua New Guinea. Falanqaynta DNA-da ayaa si lama filaan ah uga dhigtay bulshada cilmiga leh ...	Akhri wax dheeraad ah
Aug09 04: 49